China UV panonta pirinty YA503 mpanamboatra sy mpamatsy | Yingjiwei
Tontonana marbra modely
Punching tontonana kanto
Tontonana fanontana UV
Tontonana vita amin'ny hazo
Punching tontonana kanto YA602
Modela tontonana YA312
Modela tontonana YA311
Modela tontonana YA104
Tontonana marbra modely YC104
Panel marbra sandoka YC103
Tontonana marbra modely YC102
Panel marbra sandoka YC101
Tontonana vita amin'ny hazo YC205
Tontonana vita amin'ny hazo YC203
Tontonana vita amin'ny hazo YC202
Tantely tantely YB102
Tontonana fanontana UV YA503
Firenena niaviany: Sina
Famaritana ara-barotra: EXW, FOB, CFR ary CIF
Fotoana fitarihana: 7-20 andro dia miankina amin'ny habetsany.
Seranan-tsambo: Guangzhou na Shenzhen
Fe-potoana fandoavam-bola: T / T na L / C
Endri-javatra amin'ny tontonana fanontana UV aluminium
1. Mavesatra maivana, henjana sy tanjaka avo.
2. Ataovy pirinty araka ny maodelinao.
3. Mora ny manadio sy mitazona.
5. fisehoana kanto ary mateza
6. Sariaka amin'ny tontolo iainana, azo ahodina 100%.
Ny tontolon'ny fanontam-pirinty UV dia iray amin'ireo haitao mandroso indrindra amin'ny tontolon'ny aluminium. Noho ny fomba fanontam-pirinty, ny hamafin'ny lamina sy ny marimaritra iraisana misy ny lokon'ny akany miloko lavitra ny teknolojia fitsaboana tontonana nentin-drazana. Indrindra ny haitao fanontam-pirinty UV nirefy telo refy, ny mari-pahaizana momba ny embossing sy ny fandokoana azy dia ambony lavitra noho ny fizotran'ny nentim-paharazana, ary io no iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny fizotry ny etching vita amin'ny takelaka aluminium. Ny tontonana fanontam-pirinty UV dia manana ny hatevin'ny 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, sns. Ny habe farany aorian'ny famolahana dia mety hahatratra 1500x5000mm.
Noho ny haitao fanontana, ny lamina dia azo ampifanarahana amin'ny safidinao. Raha atao teny hafa, dia afaka manonta amin'ny alàlan'ny lamina omenao ianao. Noho izany, izy io dia mety indrindra amin'ny fepetra takiana manokana amin'ny sehatry ny haingon-trano, ary mety kokoa amin'ny fitsaboana amin'ny rindrina hotely avo lenta, toeram-pivarotana, biraon'ny birao, seranam-piaramanidina, gara metro, gara lalamby, hopitaly, villa, gymnasium, trano fonenana, efitrano fampirantiana ary klioba.
Anaran'ny vokatra Tontonana fanontana UV aluminium
Item No. YA503
Firaka aluminium 1100 H24 / 3003 H24 / 5005
Fitsaboana ambonin'ny tany Fanontana UV
Loko Lamina namboarina
hateviny 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Size 600 x 600mm / 600 x 1200mm / 1300 x 4000mm / habe namboarina
Fonosana Vato hazo fanondranana mahazatra
Fomba fanodinana Fametahana, fanapahana, aforitra, hiondrika, famaohana, fanamafisana, fikosoham-bary, hosodoko ary fonosana.
Fampiharana Mety amin'ny trano anatiny, hotely, hopitaly, trano fonenana, villa, gara, gymnasium, seranam-piaramanidina, gara metro, gara misy haingam-pandeha, efitrano fampirantiana, toeram-pivarotana ary klioba
Teo aloha: Marbra sandoka YC102
Manaraka: Valindrihana alimina aluminium YD101
Ny ben'ny tanànan'i Dingxi City, faritanin'i Gansu ...
Orinasa: Foshan City Nanhai Yingjiwei Aluminium Building Materials Co., Ltd.
Adiresy: No. 1, Hejing South Road, dingana 1, Hegui Ind. Zone, Heshun, Lishui Town, Nanhai Dist., Foshan, Guangdong, China
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra